अब प्रदेश २ मा चिन्ता बढेको छ | सहारा टाइम्स
Home » Bichar » अब प्रदेश २ मा चिन्ता बढेको छ
अब प्रदेश २ मा चिन्ता बढेको छ
ESAHARATIMES Sunday, March 29, 20200No comments
हामी चैत्र ४ गते कतार एयरवेज QR 652 बाट नेपाल आएका १५६ जनाको खोजबिनमा मात्र लाग्यौं तर एउटा होइन फरक(फरक मितीमा नेपाल आएका तीनवटा जहाजमा कोरोना संक्रमित भेटिएको छ ।
आज मात्र संक्रमित पुष्टी भएका एकजना ३४ वर्षिय युवा चैत्र ६ गते दुबईबाट दिल्ली र भोली पल्ट दिल्लीबाट काठमाण्डौं आएका थिए । काठमाण्डौंबाट उनी नेपालगंज र त्यंहाँबाट धनगढी पुगेका थिए । ज्वरो आएपछि उनी अस्पताल भर्ना भए र आज आएर कोरोना संक्रमित भए ।
अब उसको ट्राभल हिस्ट्री पता लगाउन सकिए पनि कांहा को को उनको वरिपरी थिए पता लगाउन असम्भव नै देखिन्छ । यो आउने माहामारीको संकेत हो तर पनि हामी नेपाली अझ पनि पूर्णरूपले सचेत भएका छैनौं ।
के बाँकी दुई विमानमा अन्य नेपाली थिएन होला ? ईश्वर नगरोस् यस्तो होस् तर भोलीको दिन माहामारी फैलिए भन्ने जसको सम्भावना बढेर गएछ, सबैभन्दा बढी त्राही प्रदेश न. २ मा हुनेछ । किनभने सबैभन्दा बढी जनसंख्या घनत्व यहि प्रदेशमा रहेको छ, विदेशी रोजगारीमा सबैभन्दा बढी जाने यसै प्रदेशको छ, कसैलाई दुख नलागोस् तर सबैभन्दा बढी अनुशासनहिन, गैरजिम्मेवार र लापरवाह पनि यहिं भेटिन्छन्, साथै खुल्ला सिमाना ठूलो चुनौती रहेको छ ।
यी यथावत कारणहरू भन्दा सबैभन्दा मुख्य भनेको कोरोनासँग लड्न हाम्रो स्वास्थ्य तयारी जुन आजको मितीसम्म देख्दा दुखदायी रहेको छ।
यसलाई यस उदाहरणले पुष्टी गर्छु आज जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा ज्वरो आएको एक वृद्ध आमालाई भर्ना लिन नमाने पछि म पनि पुगेको थिए । कारण सोध्दा एकजना अस्पताल कर्मचारीको जवाव, “उनलाई कोरोनाको आशंकामा भर्ना नलिएको, ईमरजेन्सीमा दुई तीनजना वाहेक सबै चिकित्सकहरू फोन स्वीच अफ गरि घर बसेका छन् । हामीसँग पर्याप्त PPEर अन्य श्रोत साधन छैन, केहि मात्रामा PPE आयो जुन ठुला डाक्टरहरूले लिएर घर बसेका छन्।”
तपाई सबैलाई जानकारी गराउं यस बीचमा केन्द्रबाट प्रदेश २ मा जम्मा ५० थान PPE पठाइएको छ। विराटनगरमा २०० थान पठाइएको सुन्दैछु ।
सरकार द्वारा लापरवाही पनि चरम सिमामा छ, चैत्र ४ गते कतारबाट आएका मध्येबाट प्रायजसोको ज्वरो मात्र परिक्षण गरियो तर ३३ जनाकै कोरोना निगेटिभ पुष्टी भनेर गलत सुचना समप्रेशन गरिंदैछ। कोरोना उच्च शंकास्पदमा रहेकाहरू पनि स्वाब टेस्ट नहुनु शतप्रतिशत लापरवाही हो । जनकपुरको प्रादेशिक अस्पतालमा सैम्पल कलेक्शन गरेर काठमाण्डौं पठाउने धरी साधन छैन। यति मात्र होइन, अहिले सम्म जनकपुरमा क्वारेटाइन र आइसोलेशन धरि व्यवस्थित हुन पाएको छैन् ।
यदि आउने त्रासदी अगाडी यि कुराहरू व्यवस्थित हुँदैन भन्ने प्रदेश २ कोरोना माहामारीको उच्च जोखिममा रहने छ । सरकारको तयारीको मुख हेर्नु भन्दा पनि जनताले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु पर्ने अपिहार्य देखिएको छ । सामाजिक दुरी र लकडाउन अनुशासित भएर पालना गर्नु वाहेक तत्काल अन्य विकल्प छैन ।